Arsenal 1-1 Manchester United isla dhaafi waayay iyo United oo hoos ugu dhacday kaalinta 10aad. | Weheliye Online
Home Ciyaaraha Arsenal 1-1 Manchester United isla dhaafi waayay iyo United oo hoos ugu...
Sport(Weheliye Online).Goolkiisii ​​7-aad ee Premier League xilli ciyaareedkan ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa ka dhigtay in Arsenal ay barbaro 1-1 ah la gasho kooxda Manchester United ciyaar ka dhacday Old Trafford.
Wax yar ka dib markii David De Gea uu labo badbaadin ka badbaadiyay labada ciyaaryahan ee Arsenal Bukayo Saka iyo Matteo Guendouzi, Scott McTominay ayaa kubad qurux badan oo uu helay daqiiqadii 45aad ee ciyaarta ayaa hogaanka u dhiibtay Man Utd.
McTominay ayaa madax madax ah karoos ugu soo dhigay koornada ka hor inta ayna Arsenal barbareynin 58 daqiiqo.
Aubameyang ayaa kubadii ka soo tuuray De Gea baaskii Saka, in kasta oo markii hore loo arkay inuu yahay mid offside ah, go’aanka waxaa iska rogay dib u eegida Caawiyaha Fiidiyaha (VAR).
Daqiiqado kadib markii laadka xorta ee Saka ayaa waxaa diiliyay Victor Lindelof, dhanka kale, Paul Pogba ayaa darbo xoogan shabaqa dhex dhigay, laad xor aheyd oo uu tuuray Marcus Rashford ayaa waxaa tuuray goolhayaha Arsenal Bernd Leno.
Man Utd waxay hoos ugu dhacday kaalinta 10aad iyadoo leh sagaal dhibcood. Arsenal ayaa ku jirta kaalinta afaraad iyadoo leh 12.
Previous articleOle Gunnar Solskjaer lama ceyrin doono xitaa hadii Man Utd ay ku guuldareysato inay ku dhameysato afarta ugu sareysa xilli ciyaareedkan.
Next articleMaamul Goboleedka Jubbaland oo sheegtay in ay dowlada dhaxe ka diiday kasoo qeyb galka shirka muqdisho.